Xisbiga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda oo Muqdisho ku soo gabagabeeyey kalfadhigooda 4-aad
Xisbiga Nabada iyo dimoqraadiga SPDU oo ah Xisbi mucaarad ah ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu soo gaba gaboobay shirweynihii 4aad, iyadoo ay ka qeyb galeen munaasabada lagu soo xirayay shirweynaha Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka iyo Ururada bulshada rayidka ah.
Ugu horeyn waxaa ka hadlay Xoghayaha Xisbiga Nabada iyo Dimoqraadiga C/salaan Maxamed Siyaad oo ka hadlay taariikhda iyo marxaladaha uu soo maray xisbiga, isagoo xusay in xisbiga Nabada iyo Dimoqraadiyada lagu aasaasay magaalada Bermingham ee dalka Ingiriisa sanadkii 2010-kii, wuxuuna tilmaamay in ka dib xisbiga loo soo raray Muqdisho sanadkii 2011-kii.
“Qaab dhismeedka xisbiga waa gole heer Qaran ah, waxaana uu ka kooban yahay, hogaan leh gole dhexe iyo guddi fulin, wuxuuna leeyahay laamo heer gobol iyo heer degmo ah, SPDU maaha Xisbi qabiil iyo xisbi goboleed waa xisbi Soomaali oo dhan ay ku jirto, kuna shaqeeya mabaadi’ u degsan oo ku dhisan nabad, cadaalad iyo horumar, ma hubeysna hase ahaatee waa mucaarad u taagan wax toosin” ayuu intaa ku daray xoghayaha guud ee SPDU.
Waxaa sidoo kale ka mid ahaa xubnaha ka hadlay xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah Baarlamanka Somalia kaasoo sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qeyb galka xafladan, wuxuuna xusay in xisbiga SPDU uu ka mid yahay xisbiyada ugu horeeyey ee dalka ka bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo isbaheysiyo aan hubeysaneyn oo ujeedadiisu tahay in wax la toosiyo, talada dalkana laga wada tashado.
“Madaxweynaha hadda xilka haya waxaa uu ka soo jeeda Isbaheysiga uu ka tirsan yahay xisbiga SPDU, waxaana ka dalbaneynaa inuu ka soo baxo balanqaadkiisii ahaa inuu axsaabta siyaasadeed ee dalka siinayo muhiimad gaar ah, maadaama la soo wada halgamay, haddii laga waayo inuu qabto wixii uu shalay balanqaaday in la mucaarado oo la tusiyo qaladaadja ha ogolaado” ayuu intaa ku daray xildhibaan Prof. Dhalxa.
“Haddii lagu yiraahdo shaatigaaga toosiso ama meeshaasaa kaa qaldan macnaheedu maaha in cadow lagugu yahay ee adigaa lagu toosinayaa si aad isu saxdo, marka mucaarad aan hubeysneyn haduusan jirin, dowladnimo fiican lama gaarayo, sababtoo ah mucaaradka meesha ay wax ka qaloocan yihiin ayuu wax farta ku fiiqaa” sidaa waxaa tiri xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo iyana halkaas ka hadashay.
Ubax Tahliil oo gudoomiye u ah garab ka mid ah labada garab ee uu kala jabay ururka haweenka Qaranka Soomaaliyed oo iyana halkaas ka hadashay ayaa sheegtay in iney wanaagsan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka abuurmaya ayna aad u soo dhoweynayaan in xukunka lagu raadiyo iyadoo codka dadweynaha lagu raadinayo si nabad ah.
“Xisbiyada dalka ka abuurmaya haweenku waa ku yar yihiin, waxaan kula talinayaa iney siiyaan boqokkiiba 50 xubnaha xisbiyada maadaama haweenku ay kaalin hore kaga jiraan nabadeynta iyo xaslinta dalka” ayey intaa ku dartay Marwo Ubax Tahliil.
Sidoo kale waxaa munaasabadaas ka hadlay xubno ah ka mid ahaayeen abwaan Cismaan C/llaahi Guure, xildhibaan Khaalid Cumar Cali, gudoomiyaha xisbiga Sahan Qaran, Axmed Dheere, Ex.xildhibaan Cali Seeko oo ka mid ahaa Baarlamankii hore gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Soomaaliyed Muxyadiin Xasan Afrax iyo xubno kale, iyadoo xisbiga SPDU xafladaas ku gudoonsiiyey shahaadooyin qaar ka mid ah warbnaahinta Soomaalida.
Gudoomiyaha Xisbiga nabada iyo Dimoqraadiyada SPDU C/llaahi Shiikh Xasan oo ugu dambeyntii munaasabadaas ka hadlay ayaa marka hore xusay in shahaadooyinka ay siiyeen warbaahinta gudaha aysan macnaheedu aheyn iney xisbiga si gaar ah ula taageeraan, hase ahaatee ay u siiyeen arrimo la xiriira shaqadooda, wuxuuna xusay in warbaahinta aan la siinin xumaan u arkin.
Dhinaca kale, C/llaahi Shiikh Xasan ayaa hambalyo ku aadan sanadka cusub ee miilaadiga 2013-ka u diray ciidamada dowlada Somalia iyo kuwa AMISOM ee dalka u jooga iney difaacaan qaranimada umadda Soomaaliyeed, wuxuuna ka codsaday dowlada Somalia iney ciidamada AMISOM ay ku darto diiwaanka taariikhda Soomaaliya.
“Waxaan ka digeynaa ciidamada aan ka tirsaneyn Booliska, nabad suigida iyo milateriga ee xukuumadu sheegtay in loo sameeynayo sugida amaanka Muqdisho, maxaa yeelay dastuurku ma qarin iney jiraan ciidmo kuwaas aan aheyn, waxaana qabnaa taas bedelkeed in ciidamada booliska iyo nabad sugida la tayeeyo” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan.
Gudoomiyaha Xisbiga nabada iyo dimoqraadiyada SPDU C/llaahi Shiikh Xasan ayaa ku amaanay golaha wasiirada ee lagu dhisay nidaamka 5ta beelood oo siman xilli dowladu ay ku dhisan tahay 4.5, sidoo kale baarlamanka ayuu ku amaanay sida ay dib ugu celiyeen miisaaniyada ayna u ansixiyeen markii laga soo bedelay waxyaabihii ay ka doodayeen.
“Waxyaabaha dhaliisha ah ee weli miisaaniyada nooga muuqda waxaa ka mid ah sida loo yareeyey lacagaha loo qaoondeeyey adeegyada bulshada sida waxbaarshada, caafimaadka, biyaha iyo nadaafada, waxaana haboonaan laheyd in adeegyadaas dhaqaaler badan lagu bixiyo maadaama aad loogu baahan yahay” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan.